लोकतन्त्र दिवस बिर्सिएकै हो ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
लोकतन्त्र दिवस बिर्सिएकै हो ?
विसं २०६२÷६३ जनआन्दोलन सफल भई २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा आज देशभर लोकतन्त्र दिवसको सम्झना गरिंदैछ ।
विसं २०६३ वैशाख ११ गते राति आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको मार्गचित्रअनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गर्नुभएको थियो । पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।
वैशाख ११ गतेको जगमा देशमा ठूला परिवर्तन भए पनि यो दिन बिरानो बन्दै गएको छ । यस दिन सरकारले बिर्सिएको भान हुन थालेको छ । आन्दोलनमा सक्रिय मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी जनताका बलमा भएको वैशाख ११ को परिवर्तनले हिंसा र निरङ्कुशता दुवैको अन्त्य गराएको बताउनुहुन्छ ।
“विपरीत ध्रुवका राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याई शान्ति र लोकतन्त्र बलियो भएको दिनका रुपमा वैशाख ११ इतिहासमा अङ्कित छ, यो दिनले राजतन्त्रको भविष्य समाप्त पा¥यो, एकाधिकारवादी सोचको पनि अन्त्य ग¥यो, यसैले अहिले आएको परिवर्तनका लागि यो दिन महत्वपूर्ण छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले लोकतान्त्रिक शक्तिले यसको विकल्प खोज्नु नहुने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको संस्थापक सभापतिसमेत रहनुभएका पहाडीले बताउनुभयो ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगे पनि संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म स्थिरता कायम नहुने निश्चित छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन हुुनु जरुरी छ । पहिलो चरणमा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा जुट्न सबै दलका बीचमा सहमति बन्नु जरुरी छ ।